Boobka Hantida dadweynaha iyo duurufaha ka jira Degmada Qandala – RadioQandala.com
Boobka Hantida dadweynaha iyo duurufaha ka jira Degmada Qandala
Posted on 12 October, 2017 by RadioQandala
Degamada Qandala waa degmada labaad ee G/Bari oo ay kasoo xerooto dhaqaalaha ugu badan ee gala gacanta maamulka Puntland marka laga reebo magalada Bosaso ee Xarunta Gobolka Bari .
Waxaa degmada bishii kasoo xeroota dhaqaale lagu qiyaasay ilaa dolar 175,000 oo lacgta Mareyknaka ah, lacagtaas ayaa waxaa si toos ukala qaybsado ashkaas gaar ah kuwaas ka dhigty mulkiyad iyaga ay leeyihin hantida dadweynaha waxayna taasi ay keentay in degmadaas muda 27 sano aysan helin wax horumar dhanka maamulka ah .
Madaxda degmada maamusha ayaa ah kuwa aan labedelin mana jirto laxisaabtan iyo kalawarqaadasho ay la wadagaan odayaasha degmada iyo dadweynaha kunool magalada Qandala .
Gudoomiyaha Degamada Qanadala Maxamed khuurshe iyo madaxa Maaliyada degmada Mr Saciid Waabari walowkaan ayaa ah ashkhaasta sida gaarga ugu tagri fala hantida dadweynaha waxyna labadaas masuul iyo Agaasimaha W/Qayraadka Badda iyo Kaluumaysiga Puntland C/waaxid Xirsi Joocaar oo ah nin kasoo jeeda Gobolka Mudug ay kala qaybsadaan dhaqaalaha kasoo xerooda marsada iyo khayraadka degmada .
Odayaasha degmada Qandala iyo waxgardka magalaada ayaa waxay wadaan kulamo gooni gooni ah kaaso looga tashanayo sidii magalada loogu sameyn lahaa mamaul hufann oo magalada gaarsiiya degmooyinka kale puntland maadama ay kamid tahay 3 degmo ugu dhaqaalaha baddan ee Puntland.
Sidoo kale qurbajoogta kasoo jeeda degamadaas ayaa wada kulmo xasaasi kaaso diirada lagu saarayo sidii magalada mar kale dib udhis xaga kabayaasha dhaqaalaha loogu sameyn lahaa iyo sidii meesha looga saarilahaa masuulinta caadeysty boobka dakhliga magalada iyo dib udhaca ku yimid degmada Qanadala .
shabakadda wararka ee Radioqandala idin soo wadaa maqaalo aan kaga hadli doono caqabaddaha hor taagan horumrka Degmada iyo cida hagardaamadda ku haysa degmada tariikhiga ah .
Qaybta 1aad ayaan kaga hadli doona tariikh kooban ah oo halka ay soo marty iyo qaabka ay gacanta ugu gashay 4nin oo kasoo jeeda degmada Qanadala iyo nin reer gaalkacayo ah kuwaas dhaqaalaha degmada si khaas ugu shubta jeebkooda .
WQ: Said Mahad Isdabool
la soco Qaybta 2
Daawo Maanta Degmada Qandala
« Madaxweyne Farmaajo iyo Gaas oo Hawada isu mariya Hadalo Dhagayso
FAARAX CALI SHIRE OO JEEDIYAY KHUDBAD DHINACYO BADAN TAABANAYSA DHAGAYSO »